Author: Kele Kitilar
Madaxweyne Axmed Madoobe wuxuu ka mid yahay labada hogaamiye ee aan ka hadlin moowqifkooda ku aadan khilaafka Khaliijka iyo go’aanka dhowladda dhexe. Murankaas oo markii dambe xal laga gaaray. Lahaanshaha sawirka Madaxtooyada Soomaaliya Image caption Madaxweynaha Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ka qaybgalaya caleemo-saarka madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf Murankii ka dhashay moowqifka dowladda federaalka ay ka qaadatay khilaafka dowladaha khaliijka iyo kan ay ka qaateen dowlad goboleedyada Soomaaliya ayaa cirka isku sii shareeraya, markastana waxaa kasoo kordhaya wax cusub oo arrimaha sii murjinaya.
Dawladda Federaalka Soomaaliya Af-Carabi: Warar kale oo dheeraad ah oo la xiriira qodobkan. Dalalka kale Adlas Siyaasadda portal.
Waxa uu ku baaqay in uu Kismaayo ku fidinayo gogol la’isugu keenayo madaxda dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada si loo turxaan bixiyo madmadoowga soo baxay. Qormadan tii ka horeysay ee ay BBC-da ka qortay arrintan ayaa waxa ay ku sheegnay in ay jirto saansaan ah in muranka laga yaabo in uu u talaabo baarlamaanka.
Nidaamka Federaaliga ah qeyb kama uusan ahayn qorshihii hore ee Soomaaliya markii laga asaasayay midoobidii dhulalkii ay somoaaliya gumaysan jireen Ingiriiska iyo Talyaaniga. Soomaaliya Waxay leedahay laba xarun ee warfaafineed ee ku hadla Afka Dawladda Radio Muqdisho ito Telefishinka Qaranka Soomaaliyeedwaxaa kaloo jira Saxaafad madax badaan oo badankood ku hadla Afka Beelahood.
Haddii qofna shuruudahaas buuxin waayo waxaa la tartansiinayaa labada musharrax ee helay tirada ugu badan codadka la bixyay. Waxaa sidoo kale lagu soo dhaweyn karaa in jiritaano kale lagu soo dhaweeyo in ay ku soo biiraan Federaalka, waa hadii ay doonayaan. Qodobka aad-Dhaarta Wasiirada Golaha Wasiirrada marka ay helaan kalsoonida Golaha Shacbiga waxay marayaan dhaarta ku xusan sharciga, waxaana ku hor dhaarinaya fadhi gaar ah ee Golaha Shacbiga Gudoomiyaha Maxkamada Dastuuriga.
Dawladda Wali mayeelan Dastuur dadku ansixiyeen kaas oo ka turjumaya Soomaaliya oo dhan waloow uu jiro mid kumeel gaar ah oo lagu magacaabo Dastuurka federaalka ku-meel-gaara ah Dastuurka iyo Federaalaynta. Waxaa laga keenay ” https: Kuwani waa bogag dibedda ah, waxayna ku furmayaan bog cusub. Kadib markii lasoo xulay Xubnaha Baarlamaanka Ayeey waxay doorteen Gudoomiyaha Baarlamaanka ama Afhayeen, waxay markale duurteen Madaxweyne xoomaaliya isgana sii xushay Raiisul wasaare, Sidaas ay dawladdu ku tahay Baarlamaani oo wax soomaaljya Baarlamaanka ayaa soo go’aaminaya.
Wassiirka la magacaabay haddii uu xubin ka yahay labada Aqal midkood ama uu hayo xil guud ama mid gaara ah, waa in uu iska casilaa kursigiisa 90 casho gudahood kadib markii loo dhaariyo xafiiska 2 Madaxweynuhu marka uu dhisayo Golaha Wasiirrada waa in uu tixgeliyaa qaybaha ay ka kooban tahay bulshada Soomaaliyeed. Hase yeeshee lama xusin dowladahaas kale.
Qodob kale oo Aqoon Guud ah. dasfuurka
Soomaaliya Waxay leedahay Baasaboor Elektaroonik ah inkastoo kaydka macluumaadka ama Serverka kaydiya Macluumaadka uu yaalo Imaaraatka Carabta Wali Awood uma helin laanta Socdaalka in ay usoo wareejiso Soomaaliya. Qodobka 98aad-Xil-ka-qaadista Madaxweynaha 1 Madaxweynaha Jamhuuriyadda waxaa xilka looga qaadi karaa oo keliya marka uu ku xadgudbo dastuurka, ku tagri-falo awooda xafiiska ama uu galo khiyaamo qaran.
Inta uusan hawsha bilaabin Madaxweynaha Jamahuuriyaddu wuxuu marayaa dhaarta ku xusan sharciga, waxaana lagu hor dhaarinayaa xaflad ka dhacaysa fagaare dadweynuhu joogaanwaxaana dhaarinaya Guddoomiyaha Maxkamaada Dastuuriga. Cutubka 15aad Sugidda Nabadda iyo Ammaanka Qaranka. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waa madaxa Qaranka iyo xukuumadda, waana astaanta midnimada Qaranka.
Governo federale della Somalia ; Af-Ingiriis: Soomaaliya Waxay kamid tahay Dalalka ugu Faqrisan aduunka, Ma jiro Fayo-dhawr guud oo kafaala qaadaya caafimaadka asaasiga ah ee Muwaadinka Soomaaliyeed. Cutubka 8aad Baarlamaanka Federaalka. Dowladda Imaaraatka Carabta ayaa la sheegaa in Soomaaliya ay saldhigyo ku leedahay iyo in maamul goboleedyada Soomaaliya u gacan dhaafeyso dowladda dhexe, sida ay xildhinaabada Soomaaliya ku eedeeyeen.
Madaxweyne ku-xigeenka haddii uu geeriyoodo, iscasilo ama xilka laga qaado A fhayeenka Golaha Shacbiga ayaa la wareegaya xilkiisa. Cutubka 7aad Qaab-Dhismeedka Federaalka ee Jamhuuriyadda. Cutubka 5aad Dhul, Hanti iyo Degaan. Muxuu Khilaafka Khaliijka u gilgiley nidaamka federaalka Soomaaliya? Qalabka shaqada Maxaa meeshaan la xiriiro Isbedelada daxtuurka Soo geli file bogagga khaaska ah Linkiga daaimka ah Macluumad ku saabsan Qaybta caddeynaha Boggaan soo xigo.
Cutubka 9aad Laanta Fulinta ee Federaalka. Qodobka aad-Xilka Madaxweyne Ku-xigeenka 1 Madaxweyne ku-xigeenka wuxuu caawiyaa madaxweynaha, wuxuu noqodaa sii hayaha jagada madaxweynaha marka Madaxweynahu dalka uga maqanyahay dibada ama ay ku timaado sabab uu u gudanwaayo xilkiisa.
Ma ogin in dowladdiisu ku ogtahay iyo inkale.